China: Waa muhiim maareynta internetka - BBC News Somali
China: Waa muhiim maareynta internetka
Image caption Madaxweynaha Shiinaha oo ka hadlaya shirka caalamiga ee internetka.
Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping, ayaa soo bandhigay hiigsiga dalkiisa ee ku aaddan qaabka uu mustaqbalka u maamulayo internet-ka, asaga oo sheegay in dal kasta uu u madax bannaan yahay qaabka uu arrinkaasi u wajahayo.
Madaxweynaha ayaa khudbad ka jeediyay Shirka Caalamiga ah ee Internet-ka, kaasoo uu martigeliyo Shiinaha. Dadka dhaliilsan shirka ayaa ku tilmaamay mid lagu hormarinayo aragtida xukuumadda Beijing ee ah in dawladaha ay faafreeb ku sameyn karaan macluumaadka internet-ka.
Madaxweyne Xi ayaa sheegay in loo baahan yahay xushmeynta madax bannaanida ay dalalka u leeyihiin internet-ka, isla markaana ay tahay in dalalka oo dhan lagala tashado maamulka caalamiga ah ee internet-ka.
Weriye ka tirsan BBC oo ku sugan Wuzhen oo ah halka uu shirka ka socdo, ayaa sheegay in khudbada Mr Xi ay si cad u muujineyso in ammaanka iyo maamulka internet-ka ay hadda yihiin kuwo uu Shiinaha siinayo mudnaan qaran.
Madaxda Mareykanka iyo dalalka Yurub ayaan ka qeyb galin shirkaasi.